“Macdanta ummada ka dhexeysa iyo baadka (dooga) ka baxa baadiyaha iyo dhirta, waa hanti ummadeed, qofka gaar u xidha waa daalin.” Sh Maxamed Sh Cumar Dirir. |
“Macdanta ummada ka dhexeysa iyo baadka (dooga) ka baxa baadiyaha iyo dhirta, waa hanti ummadeed, qofka gaar u xidha waa daalin.” Sh Maxamed Sh Cumar Dirir.
“Macdanta ummada ka dhexeysa iyo baadka (dooga) ka baxa baadiyaha iyo dhirta, waa hanti ummadeed, qofka gaar u xidha waa daalin.
Hargeysa- Sheekh Maxamed Sh Cumar Dirir ayaa bulshada uga digay halista ay leedahay in xoolaha ummada ka dhexeeya lagu xad-gudbo, taasoo maalinta qiyaame isagoo dusha ku sida keeni doonaa, ilaahayna naf walba waxii ay dulmiday ka xisaabin doonaa.
Mar uu ka hadlayey shareecadda islaamku waxay ka qabto wax ummada ka dhexeeya in cid gaar ah isticmaasho ayuu yidhi Sheekh Maxamed,